La Guida Da Semalt: Top Glossary Condiciones de Blogger avy amin'ny Oganda Dovrebbe Sapere
Efa naniry ny hahazo lisitr'ireo fepetra fototra fototra tokony ho fantatry ny mpamaham-bolongana ve ianao? Andao hiatrika izany, betsaka ny mahafantatra momba ny famahanam-bolongana sy ny varotra an-tserasera. Ny fananana pejy iray handikana dia tena tsara.
Soa ihany ho anao, ity dia Andrew Dyhan, ilay manam-pahaizana Semalt Digtal Services dia nanao ho anao amin'ity lahatsoratra ity. Hitanao ny lisitry ny teny filamatra mahazatra voafaritra sy voalamina araka ny abidia - loja online oculos ray ban.
AdSense: dia sehatra fampidiran-danja mifototra amin'ny adiresy misy Google. Manam-bola ny mpitoraka bilaogy rehefa mitsidika ny rohy AdSense amin'ny lahatsoratra sy ny dokam-barotra eo amin'ny tranokala na bilaogy.
AdWords: Fampiasana Google hafa mifototra amin'ny fanaovana dokam-barotra, ka ny mpitoraka blaogy sy tompon'ny tranonkala dia miankina isaky ny tsindry amin'ny teny fototra iray.
Alexa: dia fitaovan'ny tranonkala Amazon. Mampifantoka ny tranokala izy ary mampahafantatra anao hoe iza no mahazo ny fifamoivoizana indrindra. Misy isa iray voatendry ho an'ny tranonkala tsirairay mifototra amin'ny angona nangonina. Ny ambany dia ambany, ny malaza kokoa ny tranonkala.
Backlinks: dia rohy hita hita ao anaty lahatsoratry ny blaogy sy amin'ny tranonkala mifandray amin'ny tranonkala manerantany. Mampiasa backlinks i Google mba hanampiana ireo tranonkala.
Optimization amin'ny Search Engine Blackhat: Teknika tsy mahasoa no nampiasaina tsy ara-dalàna mba hampitombo ny habaka amin'ny Internet. Tafiditra ao anatin'izany ireo teknika toy ny famoronana teny fanalahidy ao anaty lahatsoratra sy fampiasana pejy vavahady.
Blog: fizarana vaovao amin'ny tranonkala ahitana lohahevitra manan-danja sy mahaliana.
Domain: no anaran'ny tranonkala.
Feed: dia fitaovana ahafahan'ny olona mandray ny vaovao farany amin'ireo tranonkala sy bilaogy malaza. Ny format manan-danja lehibe roa dia RSS sy Atom.
Google Analytics: Ny tranonkala statistika Google. Mamela anao hahazo fampahalalana mifandraika amin'ny tsipirian'ny tranokalanao e.g. ny habetsaky ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao..
Pejy Index: ny pejin-tranonkalan'ny bilaogy na tranokala.
Linkbait: dia singa mampiavaka izay mahatonga ny olona tsindriana amin'ny lahatsoratra, horonan-tsary, na sary.
Meta tags: dia tenifototra HTML izay manondro ny fanoritsoritana sy ny teny fanalahidy.
Nifanaraka: sehatra iray mitoka-monina izay azon'ny mpitoraka blaogy mifantoka.
PageRank: tranonkala na bilaogy manisa amin'ny algorithm Google.
Permalink: ny URL misy pejy na lahatsoratra bilaogy iray.
Post: lahatsoratra tokana na fandraiketana tranonkala na bilaogy.
Pro Blogger: olona iray mitazona fidiram-bola amin'ny aterineto miaraka amin'ny blaoginy ary heverina ho mpitoraka bilaogy matihanina, aka mpitoraka blaogy.
Teknika ampiasaina amin'ny fampitomboana fikarohana (SEO): ampiasaina amin'ny fampitomboana ny fikajiana ny tranonkala amin'ny fomba amam-panao biolojika. Raha tranonkala na bilaogy napetraka ho an'ny SEO dia miteny izahay fa feno hatsaraina tanteraka izy io.
media sosialy: tranonkala ahafahana mifandray amin'ny olona. Anisan'izany ny sehatra toy ny Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram, Snapchat ankoatra ny hafa.
Ireo mpandray anjara: ireo olona misafidy ny hisoratra anarana ao amin'ny tranokalanao na blôginao mba hahazoana rohy vaovao na vaovao amin'ny alalan'ny mailaka.
Tags: keywords izay mahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny olona hahita izay ilainy ao amin'ny tranokalanao.
Ny votoaty viralin: ny votoaty malaza na horonan-tsary, sary, na lahatsoratra izay nozarain'ny olona maro ao anatin'ny fotoana fohy.
Vlogging: ny fampiasana lahatsary fampiroboroboana ho fampiroboroboana votoaty izay mety ho vakiana amin'ny lahatsoratra bilaogy.
Wordpress: sehatra fitorahana bilaogy manerantany.
WordPress Plugin: misy ny plugins izay mamaha olana samihafa. Ny plugin tsirairay dia ampahany amin'ny code izay afaka miditra ao amin'ny blôginao na ao amin'ny tranonkalanao.
URL: dia fanafohezana ny Lokan'ny Uniform Resource. Ny URL dia rohy izay hitondra anao amin'ny pejy manokana ary hita ho adiresy ho an'ireo tranonkala na pejy ireo.
Ity lisitra ity dia tsy feno, fa manome anao ny teny mahazatra indrindra izay ho hitanao ary ny teny fototra tena tokony ho fantatry ny mpamaham-bolongana rehetra.